မနေ့ကငါဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူရှိ၏ကျနော်တို့အချို့ရွှေ့ပြောင်းဆွေးနွေးနေခဲ့ကြသည်။ လိုအပ်သောအဆင့်အချို့သည်ဒိုမိန်းမှတ်တမ်းအချို့ကိုမွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏ DNS ကိုမည်သူရရှိသနည်းဟုမေးခဲ့သည်။ အဲဒီမှာအလွတ်ပြူးအချို့ရှိခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ငါအလျင်အမြန်လုပ်ခဲ့တယ် GoDaddy တွင် Whois ရှာဖွေသည် domains များမည်သည့်နေရာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းနှင့်မည်သည့်အမည်များကိုဖော်ပြထားသည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်။
ရလဒ်တွေကိုငါမြင်တဲ့အခါငါတကယ်ကိုအံ့သြသွားခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးကတကယ်မလုပ်ခဲ့ဘူး ပိုင်ဆိုင် သူတို့၏ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သူတို့နှင့်အလုပ်လုပ်သောအေဂျင်စီတစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်။
သင်ပေါင်းစည်းမည့်အခြားပလက်ဖောင်းများအတွက်သင်၏ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆက်တင်များကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ရန်လိုလျှင်မည်သို့လုပ်မလဲ။ သင်ရပါသလား သင်၏တတိယပါတီကိုပေးချေပါ သင်ပိုင်ဆိုင်သင့်သောအရာတစ်ခုကိုအပ်ဒိတ်လုပ်လိုပါသလား။ ဒီကုမ္ပဏီကတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အေဂျင်စီကလည်းသူတို့ကနှစ်စဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းရဲ့အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုတောင်းနေတယ်။
မင်းရဲ့လုပ်ငန်း domain မှတ်ပုံတင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ ကုန်ဆုံးသည်? ငါတို့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကုမ္ပဏီကဘယ်သူကအကောင့်ပိုင်ဆိုင်သလဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့နဲ့အခြားတစ်ယောက်ကမမှတ်ပုံတင်ခင်မှတ်ပုံတင်ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ကြိုးစားရမယ်။
သင်ငွေတောင်းခံမှုရှိလျှင်ဘာလုပ်မလဲ ြငင်းခုံ မင်းရဲ့ဒိုမိန်းရဲ့မှတ်ပုံတင်သူအဖြစ်စာရင်းဝင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တရား ၀ င်ငြင်းခုံမလား။
မင်းရဲ့မှတ်ပုံတင်အဖြစ်စာရင်းဝင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ စီးပွားရေးထဲက သို့မဟုတ်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအေးခဲနေသလား။
မင်းရဲ့မှတ်ပုံတင်အဖြစ်စာရင်းဝင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကဘာဖြစ်မလဲ ပိတ်တယ် မင်းကုမ္ပဏီရဲ့ domain ရဲ့ပိုင်ရှင်အဖြစ်စာရင်းတင်ထားတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာလား။
မှန်ပါတယ်…ဒီပြသနာတစ်ခုခုကမင်းကိုပြဿနာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဤအထူးဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်သည်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်သူတို့၏ဒိုမိန်းပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းအွန်လိုင်း၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ဆုံးရှုံးခြင်းသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေမည့်အရာများ - ၎င်းတို့၏ကော်ပိုရိတ်အီးမေးလ်မှအရာအားလုံးကို၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
သင်၏ဒိုမိန်းပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သင့်သည် ဘယ်တော့မှ ပြင်ပအိုင်တီကုမ္ပဏီ (သို့) အေဂျင်စီအပါအ ၀ င်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးရမည်။ မင်းကတတိယပါတီကမင်းရဲ့လက်လီအငှားနဲ့မင်းရဲ့အိမ်ပေါင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပေးသလိုမင်းရဲ့ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဟာမင်းရဲ့ဥစ္စာပဲ။
Whois ဖြင့်သင်၏ domain မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုမည်သို့ကြည့်မည်နည်း
Whois သည် domain တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကိုတစ်ကယ်ဖြစ်စေ၊ programmatically ဖြစ်စေရှာဖွေနိုင်သော domain ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်အများပြည်သူမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပုဂ္ဂလိကအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Whois ကိုသုံးပြီးမင်းရဲ့ဒိုမိန်းအချက်အလက်တွေကိုရှာကြည့်ရင်မင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ domain မှတ်ပုံတင်အကောင့်ထဲမှာရှိမရှိပြောပြနိုင်သင့်တယ် (ဥပမာ။ GoDaddy) သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိကိုသင်မမှတ်မိပါက ... မည်သူဖြစ်သည်ကိုခြေရာခံပါ။
ဒါကတော့နမူနာပါ Whois ရလဒ်:
WHOIS ရှာဖွေမှုရလဒ် Domain Name: martech.zone Registry Domain ID: 83618939503a4d7e8851edf74f2eb7d0-DONUTS မှတ်ပုံတင် WHOIS ဆာဗာ: whois.godaddy.com မှတ်ပုံတင် URL: http://www.godaddy.com နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 2019-05-15T19: 41: 47Z ဖန်တီးမှု နေ့စွဲ၊ ၂၀၁၇-၀၁-၁၁T၀၁: ၅၁: ၃၀Z မှတ်ပုံတင်အရာရှိမှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၊ ၂၀၂၂-၀၁-၁၁T၀၁: ၅၁: ၃၀Z မှတ်ပုံတင်အရာရှိ: GoDaddy.com၊ LLC မှတ်ပုံတင်အရာရှိ IANA ID: ၁၄၆ မှတ်ပုံတင်အရာရှိအလွဲသုံးစားမှုဆက်သွယ်ရန် Email ဖုန်း၊ +၁.၄၈၀၆၂၄၂၅၀၅ ဒိုမိန်းအခြေအနေ: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited ဒိုမိန်းအခြေအနေ: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited အခြေအနေ - clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
မှတ်ပုံတင်သူပြည်နယ်/ပြည်နယ်: အင်ဒီယားနားမှတ်ပုံတင်နိုင်ငံ: အမေရိကန်မှတ်ပုံတင်အီးမေးလ်: ဆက်သွယ်ရန် Domain Holder link ကို https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone နည်းပညာအီးမေးလ်: ဆက်သွယ်ရန် Domain Holder link ကို https တွင်ရွေးချယ်ပါ။ : //www.godaddy.com/whois/results.aspx? domain = martech.zone Admin Email: https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone တွင်ဆက်သွယ်ရန် Domain Holder link ကိုရွေးပါ။ အမည်ဆာဗာ: NS09.DOMAINCONTROL.COM အမည်ဆာဗာ: NS10.DOMAINCONTROL.COM
လုပ်ငန်း၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ (သို့) မှတ်ပုံတင်သူ၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည်စာချုပ်ချုပ်သူ၊ အေဂျင်စီ (သို့) အိုင်တီကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလျှင်၎င်းတို့အားချက်ချင်း DNS ပြောင်းပေးပါ။ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ မင်းဆီကိုပြန်လာပြီးမင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်အကောင့်ကိုမင်းသေချာလုပ်ပါ။
ကုမ္ပဏီကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ဒိုမိန်းတွေဆုံးရှုံးတာကိုငါတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအရင်ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားခွင့်ပြုပြီးသည့်နောက်တွင်သူတို့၏ဒိုမိန်းကိုပြန်လည်ရယူရန်တရားရုံးသို့တင်ရမည်။ ၀ န်ထမ်းသည် domains များကို ၀ ယ်ပြီးသူ၏အမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
ငါချက်ချင်းပဲ IT ကုမ္ပဏီကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးသူတို့ပိုင်ရှင်ပိုင်အကောင့်ကိုဒိုမိန်းလွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်သည်။ သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကခင်ဗျားမျှော်လင့်ထားတာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ဖောက်သည်ဆီတိုက်ရိုက်စာရေးတာ၊ ငါလိုချင်တာလို့အရိပ်အမြွက်ပြောတယ် ဆွဲချွတ်သည် ငါ၏နာမ၌ဒိုမိန်း, ငါတစ်ခုခုအတွက်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီ ဘယ်တော့မှ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
မင်းရဲ့ Domain ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ Third-Party လုပ်ချင်ရင်ဘာလုပ်မလဲ။
ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ domain ကိုတတိယစီမံခန့်ခွဲရန်လိုလားသည့်အချိန်များရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်အလုပ်ဖြစ်သည်။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်တယ် ဖြန့်ဖြူးအီးမေးလ်လိပ်စာ (ဥပမာ။ accounts@yourdomain.com) သူတို့က Third-party အီးမေးလ်လိပ်စာတွေကိုထပ်ထည့် (သို့) ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်နည်းလမ်းများစွာအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။
ဖြန့်ဖြူးရေးစာရင်းရှိလူတိုင်း (စကားဝှက်အပြောင်းအလဲများအပါအ ၀ င်) အကောင့်သို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုရှိလျှင်အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။
Pro အစွန်အဖျား: မင်းရဲ့ domain အမှန်ကိုမင်းရဲ့ domain နဲ့အတူတူ domain နဲ့မသတ်မှတ်ပါနဲ့။ မင်းရဲ့ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်မှတ်တမ်းကသက်တမ်းကုန်ရင်ဒါမှမဟုတ်မင်း DNS ပြောင်းသွားရင်မင်းအီးမေးလ်အသိပေးချက်တွေကိုမင်းရဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဒိုမိန်းတစ်ခုထက်ပိုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အခြား domain တစ်ခုတွင်အကောင့်ဖြန့်ချီရေးစာရင်းတစ်ခုသတ်မှတ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဒိုမိန်းအမည်ကိုစစ်ဆေးပြီးပိုင်ဆိုင်မှုသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အကောင့်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ဤအရာသည်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အားထိန်းချုပ်မှုကိုသင်လက်လွှတ်မခံသင့်သောအရာဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် 11 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 45 ရက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက် 30:2021 နာရီတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Tags: domain access ကိုဒိုမိန်းအမည်ဆာဗာdomain privacy ကိုဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်GoDaddyမင်္ဂလာပါ